50g Cream 31000.0 Ks
သင့်ဆုတောင်းတွေကိုပြည့်ဝစေဖို့ Snail Wish Vita Collagen Whitening Cream ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ Selfie Ready Look ကို ချက်ချင်းရရှိစေမှာပါ။ အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ Snail Mucus က အရေပြားကို အစိုဓါတ် ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရည်အသွေးမြင့် Vita Collagen ပြည့်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ရေရှည်အသုံးပြုပါက အသားအရေကို တင်းရင်းချောမွေ့နုပျိုစေပါတယ်။ အဆင့်မြင့် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေက အရေပြားအိုမင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး နေလောင်ကွက်များ၊ အမည်းစက်များနှင့် ဝက်ခြံအမာရွက်များကိုပါ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ သဘာဝထွက်ပစ္စည်းများနှင့်သာ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် Sensitive Skin များပါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Snail Mucus - Snail Mucus က အရေပြားကို အပြည့်ဝဆုံးအာဟာရဓါတ်နှင့် အစိုဓါတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးသည်။ Vita Collagen - အသားအရေတင်းရင်းမှုအတွက် အဓိကလိုအပ်သော ကိုလာဂျင်ပြည့်ဝစွာ ထည့်သွင်းပေးထားသောကြောင့် အရေးအကြောင်းများကို သိသာစွာပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းနုပျိုစေသည်။ Protein, Vitamins - အသားဓါတ်နှင့် Vitamin များက အရေပြားအသစ်ထွက်ပေါ်မှုကို အားပေပြီး အိုမင်းပျက်ဆီးနေသော အရေပြားဆဲလ်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ Antioxidants - အစွမ်းထက် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အမည်းကွက်၊ အမည်းစက်များ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။
မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် မျက်နှာသစ်အပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Primer အနေနဲ့လည်း မိတ်ကပ်မလိမ်းမီ အသုံးပြုပေးခြင်းဖြင့် မိတ်ကပ်က အသားအရေကို ဖျက်စီးမှုကနေ ကာကွယ်ပေးနေပါတယ်။
အသားအရေကို ချက်ချင်းဖြူဝင်းစေပြီး အစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အပြင် အာဟာရဓါတ်ကိုလည်း ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး ကျန်းမာနုပျိုစေပါတယ်။ အရေးအကြောင်းများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အသားအရေအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို တားဆီးပေးပါတယ်။ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်နှင့် အမည်းစက်များ၊ ဝက်ခြံ အမာရွတ်များကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အရေပြားဆဲလ်များ အသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို အားပေးပြီး နုပျို၊ ဝင်းပ၊ တင်းရင်းစေပါတယ်။ အရေပြားအတွင်းသို့ လွယ်ကူစွာစိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး ကပ်စေးခြင်းများ မရှိပါဘူး။
အရမ်းကောင်းတဲ့snail wishလေးပါရှင့် ကိုယ်တိုင်သုံးတာကြိုက်လို့ပြန်ရောင်းနေp?
Nan Ei Ei Zin
Believe the product Believe the company
Kyu Kyu Moe
ချစ်သူအတွက် အကောင်းဆုံးလက်ဆောင် 🐌 Snail Wish Whitening Cream 🐌 ❤️ Valentine Day လဲ ရောက်တော့မယ် ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘာလေးပေးရင် ကောင်းမလဲ စဥ◌်းစားရခက်နေလား❓ ခေါင်းစားခံပြီး မစဥ်းစားနဲ့တော့ 🐌 Snail Wish Whitening Cream ရှိပါတယ်။ 🐌 Snail Wish Whitening Cream က အသားအရေကို တင်းရင်းချောမွေ့ နုပျိုစေတာကြောင့် ချစ်သူလေးက အချစ်တွေ ပိုပိုတိုးလာစေမယ် အသေအချာပဲနော် Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၃၁,၀၀၀ ကျပ်
မှန်ကြည့်တိုင်း စိတ်ချမ်းသာချင်ရင် 🐌 Snail Wish ကို သုံးနော် 🐌 Snail Wish Whitening Cream မှာပါဝင်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက သဘာဝထွက် ပစ္စည်းများနှင့်သာ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ☀ မနက် တစ်ကြိမ် 🌙 ည တစ်ကြိမ် ပုံမှန် လိမ်းပေးရုံနဲ့ အသားအရေလေး ဖြူစင်ဝင်းပ အိစက်ညက်ညောနေစေတယ် တင်းရင်းနုပျိုစေတယ်။ အမည်းစက်၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှန်ကြည့်တိုင်း စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝ ရချင်ရင်တော့ Snail Wish ကို ပုံမှန်သုံးနော် Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၃၁,၀၀၀ ကျပ်
အချက်(၃) ချက်နဲ့ အရေပြား ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် ?Snail Wish? ? Snail Wish Whitening Cream က အချက် (၃) ချက်နဲ့ မျက်နှာအသားအရေမှာ ဖြစ်သမျှ ပြဿနာ တော်တော်များများကို ဖြေရှင်းပေးမှာပါ။ ? Snail Mucus က Skin Barrier ကို ကျန်းမာစေတယ် ? Titanium Dioxide က နေရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးတယ် ? Niacinamide က အရေပြားဆဲလ် အသစ်ဖြစ်တာကို အားပေးတယ် တိကျတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေပေးတဲ့ Ingredients ကြောင့် မျက်နှာအသားအရေလေး နုပျို၊ ဝင်းပ၊ ဖြူစင်၊ တင်းရင်းနေစေမှာပါ။ Sensitive Skin တွေပါ သုံးလို့ရပါတယ်။ Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၃၁,၀၀၀ ကျပ်
အသားအရေလေး တင်းရင်းနုပျိုဖို့ မေမေ့အတွက် သီတင်းကျွတ် လက်ဆောင် ??? ? Snail Wish Whitening Cream မှာ Vita Collagen ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေတင်းရင်းမှုအတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ ကော်လာဂျင် ပြည့်ဝစွာ ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် အရေအကြောင်းများကို သိသာစွာ ပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းနုပျိုစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မေမေများအတွက် ? Snail Wish Whitening Cream ကို ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်လို့လဲ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၃၁,၀၀၀ ကျပ်
ဘယ်လိုအသားအရောင် ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝကျကျ လှနေဖို့ ? Snail ? ရှိတယ်နော် ညိုညိုလေးလား ❓ ဖြူဖြူလေးလား ❓ ရွှေအိုရောင် အသားပိုင်ရှင်လေးလား ❓ဘယ်လို အသားအရောင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ? Snail Wish Whitening Cream ? ကို သုံးလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ? Cream လေးက စေးကပ်ခြင်း မရှိပဲ အရေပြားအတွင်း လွယ်လွယ်ကူကူ စိမ့်ဝင်နိုင်တာကြောင့် အသားအရေနဲ့ တသားထဲ ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ ဘယ်လိုအသားအရောင်မဆို သဘာဝကျကျ လှနေဖို့ ? Snail Wish Whitening Cream ? က အသင့်ရှိနေပါတယ်။ Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၃၁,၀၀၀ ကျပ်